IPumpu yePlastiki yeSiko loKwenza iSepha yeShishini yokuFakela iMpompa yeLoshini yokuFakela iMveliso yezandla kunye neFactory | Yongxiang
IPump yeSepha yoShishino lwePlastiki yesiKhubhu yePump yeLotion yokuhlamba izandla
Igama lemveliso: Screw Lotion Pump
Igama leBrand: YuYao Chenfei
Inombolo yomzekelo: CY102-2
Ubungakanani: 24/410 28/410
Ukuvalwa: I-Aluminiyam yeRibber eSmooth
Umbala: Yenzelwe wena
Ubude betyhubhu: Customized Tube
MOQ: 10000 iiPC
Ixabiso lokukhupha: 1.6-2.0ml / T
Isampuli: Inikezelwa ngesisa
Ukusetyenziswa: ngebhotile yeplastiki okanye ibhotile yeglasi kwi-lotion dispenser
Usetyenziso: Isetyenziselwa ulwelo lokuhlamba izandla, isepha engamanzi, ishampu, isilungisi seenwele, ijeli yeshawa, njl.
I-Yuyao Chenfei-Umenzi-mveliso oyingcali uzibandakanye ekupakisheleni iisaluni zobuhle, amayeza kunye neemveliso zokuhlamba
Ezi mpompo zokuthambisa zenzelwe iibhotile zempompo yelotion okanye iidispenser kwaye ziza ngemibala eyahlukeneyo. Zifanelekile kwizinto ezibonakalayo, ezifana nokuthambisa, iisepha zolwelo, kunye neshampu, kunye namayeza, izithambiso, kunye nezinye iimveliso zempilo nezobuhle.
Igqibelele kwizinto eziphathekayo ze-viscous
Iimpompo ze-24/410 zisenokungangeni zonke iintamo
Ikhupha i-2mL nge-stroke nganye
I-Plunger itshixa phantsi ukuze ithunyelwe kunye nokugcinwa
Iimpompo ze-polypropylene lotion zine-slot yokutshixa ngaphakathi kwe-cap kwaye ziza kuthunyelwa kuwe kwindawo evaliweyo, ilungele ukusetyenziswa ngokuthe ngqo kwisitya sakho. Iimpompo ze-lotion zivumela iimveliso eziphezulu ze-viscosity, ezifana ne-lotions kunye neesepha zamanzi, ukuba zikhutshwe ngokulula. Iimpompo ze-lotion zingasetyenziswa ngeglasi, iplastiki, okanye izitya zetsimbi, kwaye zikhuphe kakuhle i-0.5 ml yemveliso nge-stroke. Iimpompo zokuthambisa ziyafumaneka kuwe kwi-cap ye-24/410 ubukhulu obunobude obahlukeneyo betyhubhu yediphu.
IiPumpu zeLotion zibonelela nge-viscosity ephezulu kunye namandla okuqalisa kwiimveliso ezininzi kubandakanya iikhrimu, iitoni, ukhathalelo lweenwele, iisepha zolwelo kunye, ewe, izinto zokuthambisa. Iimpompo zokuthambisa ziyafumaneka ukusuka kwinqanaba le-1.2cc ukuya kwi-30cc, kubandakanywa iimpompo ezikhethiweyo ezikhusela imveliso ngokuchasene nokungena kwamanzi. Iimpompo zokuthambisa zisetyenzisiwe kukhathalelo lweenwele, ukhathalelo lomntu, ukhathalelo lwezilwanyana zasekhaya, ushishino lweemoto kunye nokhathalelo lwasekhaya.
I-1: ukuthunyelwa ngokukhawuleza, ngenxa ye-automation yezixhobo, ukulinganisa umthamo, ukuthunyelwa ngokukhawuleza.
I-2: umgangatho olungileyo, ulawulo oluluqilima lwesebe lokulawula umgangatho, ukuqinisekisa umgangatho
I-3: ixabiso elifanelekileyo, isityalo sokuvelisa isikali, ukuveliswa kwe-automation, ukunciphisa kakhulu iindleko zemveliso, ukuqinisekisa ukusebenza kweendleko zeemveliso.
4: Iimpompo zethu zokuthambisa zikhokelwa kwaye zibekwe iliso phantsi kwe-ISO9001. Ukhuseleko lokusingqongileyo oluphezulu oluselubala imathiriyeli ekrwada, eyomelele, eethe-ethe kunye nekhabhathi.
Ngaphambili: Ekhohlo-Ekunene Isitshixo sePump Factory ixabiso 28/400 28/410 28/415 Ilotion yePlastiki Impompo yolwelo lwesepha yokuhlamba izandla Isixhobo sempompo seDispenser
Okulandelayo: 18/410 20/410 24/410 360 iDegree Spray Nozzle Perfume IAtomizer iplastiki ecocekileyo yokutshiza ngesitshizi senkungu esicacileyo sebhotile yokuthambisa
Impompo yeLotion enkulu
Ibhotile yeLotion yeglasi eneMpompo
Impompi yokutshixa eKhohlo ngasekunene
Impompi yokukhupha i-Lotion ye-Nozzle ende
Ibhotile yeLotion enempompo
Ibhotile yePump yeLotion
I-Lotion Pump Dispenser
Ibhotile yePlastiki enePump yeLotion
Ilotion yebhotile yempompa
Ibhotile yePump Lotion
Ekhohlo-Ekunene Tshixa Lotion Pump Factory ixabiso 28/40...